Foods – Page2– Healthy Life Journal
သင့်ကို ပိုမိုဆွဲဆောင်မှု ရှိစေမည့် အစာငါးမျိုး
မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) သဘာဝအရ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ဆံပင်၊ အသားအရေနဲ့ လက်သည်းခြေသည်းတွေ အိုမင်းရင့်ရော်မှုဖြစ်တတ်ပေမယ့် အောက်ပါအစားအစာ ငါးမျိုးကတော့ သင့်ကို အသက်ကြီးတဲ့အထိ လှလှပပ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေအောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ (၁) သင်္ဘောသီး အမေရိကန်အာဟာရဂျာနယ်ရဲ့ လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ အစားအစာကနေ ဗီတာမင်စီရရှိမှု မြင့်မားလေလေ၊...
မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) (၁) သစ်ကြားသီး ကောင်းတဲ့ အဆီတွေပါဝင်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အခွံမာသီးဖြစ်ပါတယ်။ (၂) အဆီများသောငါး အဆီများတဲ့ငါးမှာပါတဲ့ အိုမီဂါသရီးဖက်တီးအက်ဆစ်က နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် မရှိမဖြစ်အရေးပါပါတယ်။ (၃) ဝိုင်နီ ဝိုင်နီမှာပါတဲ့ ရက်စ်ဗာရထရောဟာ သွေးကြောတွေ ထိခိုက်မှုမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး သွေးတွင်းမကောင်းတဲ့...
မေး ။ လေဖြတ်တာ အစားအသောက်နဲ့ ဆိုင်ပါသလားရှင့်။ ဒေါ်မြသွေး၊ တာမွေ။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်(အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ ။ လေဖြတ်တာက အစားအသောက်နဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ လေဖြတ်တာ (Stroke) မှာ သွေးတိုးပြီး သွေးကြောပြတ်တာနဲ့...
အချို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအကြောင်း အံ့အားသင့်စရာ အချက်များ
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ ငရုတ်သီးမှာ မှည့်နေတဲ့ အသီးဟာ အာဟာရ တန်ဖိုးအမြင့်မားဆုံးပါပါတယ်။ အနီရောင် ငရုတ်သီးမှာ အစိမ်းရောင် ငရုတ်သီးမှာထက် ဗီတာမင်အေ ၁၀ဆနဲ့ ဗီတာမင်စီ နှစ်ဆ ပိုမိုပါဝင်ပါတယ်။ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ပန်းဂေါ်ဖီနဲ့ သခွားသီးတွေက ပန်းသီးနားမှာကပ်ပြီး...
ညရှစ်နာရီထိုးပြီးချိန် ရှောင်သင့်သည့် အစာများ
၊ ငွေစင်ကြယ်ယံ ၊ ညဘက်မှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျစေဖို့ ညရှစ်နာရီကျော်ချိန်မှာ အောက်ပါအစားအသောက်တွေကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ (၁) ချောကလက် အညိုရောင်ချောကလက်မှာ မဂ္ဂနီဆီယမ်နဲ့ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်ပါဝင်ပေမယ့် ကဖင်းဓာတ်လည်း ပါဝင်တာကြောင့် ညရှစ်နာရီကျော်ချိန် စားရင် လန်းဆန်းပြီး အိပ်ချင်စိတ်ကင်းနေစေပါတယ်။ (၂) အခွံမာစေ့...
ကင်ဆာကာကွယ်ပေးမည့် သဘာဝအစာ ၁၂မျိုး
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်တွန်းလှန်ပေးနိုင်တဲ့ သစ်သီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်နဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေကို စားပေးနိုင်ဖို့ ကင်ဆာတားရာမှာ ထိပ်တန်းသဘာဝအစာ ၁၂ မျိုးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းနှင့် ပန်းဂေါ်ဖီပွင့် ဂေါ်ဖီမျိုးနွယ်တွေဖြစ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာ အင်ဒိုးသရီးကာဘီနောဓာတ်ပါဝင်ပြီး...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) Q. အမျှင်ဓာတ်ပါတဲ့ အစားအသောက်တွေက ဘာတွေလဲ၊ အမျှင်ဓာတ်ပါတဲ့ အစားအသောက်တွေ စားရင် ဘယ်လို ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေကို ရရှိနိုင်ပါသလဲ။ A. အမျှင်ဓာတ်ပါတဲ့ အစားအသောက်တွေကို လူတိုင်း စားသင့်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ တစ်နေ့ကို အမျှင်ဓာတ် ၂၅...